uhlelo lokufudumeza lwamandla kazibuthe wokubamba, ukunama, ukuncibilika, ukufaka
Ikhaya / ukukhishwa kwezinga eliphezulu lokushisa / uhlelo lokushisa lokungeniswa okunamandla
uhlelo lokufudumeza komoya lokungeniswa kwamandla
Categories: ukukhishwa kwezinga eliphezulu lokushisa, Umshini wokushisa wokufakelwa, Umshini Wokukhwabanisa Ukukhishwa, Ukunikezwa Kwamandla Okunciphisa, Umshini Wokushisa Wamafilimu Ephakathi Tags: ukukhishwa kwamazinga okushisa okuphezulu, I-IGBT yokufakelwa kokushisa uhlelo, ukukhishwa kwesibhakabhaka sokungena, Umshini Wokubamba Insimbi, umshini wokwakha okwenziwayo, induction heater umenzi, induction lokushisa idivayisi, Imishini yokushisa yokushisa, Umshini wokushisa wokushisa, ukufakwa kokushisa uhlelo, umshini wokuqhafaza wokungeniswa, i-heat-induction yokushisa, uhlelo lokufudumeza komoya lokungeniswa kwamandla
Uhlelo lokushisa lwe-IGBT magnetic induction
ukwakheka nosayizi ohlukile ukufakwa kwe-coil yokushisa kungashintshwa kalula ukushisa izingxenye ezahlukahlukene.
Series imodeli Amandla wokufaka max I-max Max yamanje Imvamisa ye-Oscillate Input Voltage Umjikelezo womsebenzi
I-DW-MF-15 Induction Generator 15KW 23A 1KHz-20KHz Ngokusho kwesicelo 3phases380V ± 10% 100%
I-DW-MF-25 Induction Generator 25KW 36A
I-DW-MF-35Induction Generator 35KW 51A
I-DW-MF-45 Induction Generator 45KW 68A
I-DW-MF-70 Induction Generator 70KW 105A
I-DW-MF-90 Induction Generator 90KW 135A
I-DW-MF-110 Induction Generator 110KW 170A
I-DW-MF-160 Induction Generator 160KW 240A
I-DW-MF-300 Induction Generator 300KW 400A
I-DW-MF-45 Ukushisa Ukudonsa I-Rod Yokufaka Isithanga 45KW 68A I-1KHz-20KHz 3phases380V ± 10% 100%
I-DW-MF-70 Ukushisa Ukudonsa I-Rod Yokufaka Isithanga 70KW 105A
I-DW-MF-90 Ukushisa Ukudonsa I-Rod Yokufaka Isithanga 90KW 135A
I-DW-MF-110 Ukushisa Ukudonsa I-Rod Yokufaka Isithanga 110KW 170A
I-DW-MF-160 Induction Heating Rod Yokufaka Isithando Somlilo 160KW 240A
I-DW-MF-15 Induction Melting Furnace 15KW 23A I-1K-20KHz 3phases380V ± 10% 100%
I-DW-MF-25 Induction Melting Furnace 25KW 36A
I-DW-MF-35 Induction Melting Furnace 35KW 51A
I-DW-MF-45 Induction Melting Furnace 45KW 68A
I-DW-MF-70 Induction Melting Furnace 70KW 105A
I-DW-MF-90 Induction Melting Furnace 90KW 135A
I-DW-MF-110 Inkokhelo Yokuqothula Isihenqo 110KW 170A
I-DW-MF-160 Inkokhelo Yokuqothula Isihenqo 160KW 240A
I-DW-MF-110 Induction Equipment Hardening Equipment 110KW 170A I-1K-8KHz 3phases380V ± 10% 100%
I-DW-MF-160Iuction Equipment Ezikhandlayo 160KW 240A
I-DW-HF-15 Series I-DW-HF-15KW I-15KVA 32A I-30-100KHz Isigaba esisodwa se-220V 80%
I-DW-HF-25 Series I-DW-HF-25KW-A I-25KVA 23A I-20K-80KHz 3phases380V ± 10% 100%
I-DW-HF-35 Series I-DW-HF-35KW-B I-35KVA 51A
I-DW-HF-45 Series I-DW-HF-45KW-B I-45KVA 68A
I-DW-HF-60 Series I-DW-HF-60KW-B I-60KVA 105A
I-DW-HF-80 Series I-DW-HF-80KW-B I-80KVA 130A
I-DW-HF-90 Series I-DW-HF-90KW-B I-90KVA 160A
I-DW-HF-120 Series I-DW-HF-120KW-B I-120KVA 200A
I-DW-HF-160 Series I-DW-HF-160KW-B I-160KVA 260A
I-DW-UHF-4.5KW 4.5KW 20A I-1.1-2.0MHz Isigaba esisodwa220V ± 10% 100%
I-DW-UHF-6.0KW 6.0KW 28A
I-DW-UHF-10KW 10KW 15A I-100-500KHz 3phases380V ± 10% 100%
I-DW-UHF-20KW 20KW 30A I-50-250KHz
I-DW-UHF-30KW 30KW 45A I-50-200KHz
I-DW-UHF-40KW 40KW 60A I-50-200KHz
I-DW-UHF-60KW 60KW 90A I-50-150KHz
1.Ukushisa (UKWAKHA okushisayo, ukufaka okushisayo nokuncibilikisa)
Induction Hot UKWAKHA ihlose ukuqamba izingcezu zomsebenzi wokushisa okuthile (izinto ezahlukahlukene zidinga amazinga okushisa ahlukile) kwezinye izinhlobo ngokufaka umshini wokwenza ngosizo ngocindezelo lwe-punch, umshini wokufaka noma ezinye izinto, ngezimo, ukukhishwa okushisayo kwekesi lewashi, iwashi flan, isibambo, isikhunta isesekeli, ikhishi netafula ware, ubuciko be-ware, ingxenye ejwayelekile, i-fastener, ingxenye eyenziwe ngomshini, iloksi yethusi, i-rivet, iphini lensimbi nephini.
Ukufakwa okushisayo kubhekisa ekuxhumaneni kwezinsimbi ezahlukahlukene noma izinsimbi ngezinsimbi ezingekho ngaphansi kwento ngokushisa ngokuya ngomgomo wokunweba okushisayo noma ukuncibilikisa okushisayo, ngezehlakalo, ukufakwa kwe-welding komgogodla wethusi we-radiator yekhompyutha eneshidi le-aluminium kanye newebhu yesipikha, inhlanganisela yensimbi nepulasitiki ityhubhu, ukubekwa uphawu kwe-aluminium foil (izinyo lokunamathisela izinyo), i-motor rotor nokufakwa uphawu kwento yokushisa kagesi e-tubular.
Ukuncibilikisa ikakhulukazi kuhlose ukuncibilikisa insimbi ibe wuketshezi ngokusebenzisa ukushisa okuphezulu, okusebenza kakhulu ekuncibilikiseni kwensimbi, insimbi, ithusi, i-aluminium, i-zinc kanye nezinsimbi ezahlukahlukene ezinhle.
Ukwelashwa kwe-2.Heat (ukucima indawo)
Cima i-Hardware namathuluzi ahlukahlukene, njenge-plier, i-wrench, isando, i-ax, amathuluzi okugoqa kanye ne-shear (i-orchard shear).
Cima izinto ezahlukahlukene zezimoto nezithuthuthu, njenge-crankshaft, induku yokuxhuma, iphini le-piston, isondo leketanga, isondo le-aluminium, i-valve, idwala lengalo, idrayivu shaft shaft, shaft encane nemfoloko Amathuluzi kagesi ahlukahlukene, njengamagiya namazembe.
Cima amathuluzi omshini, njengasemgqeni wepayipi lesitimela nomzila wesitimela.
Cima izingxenye ezahlukahlukene zensimbi ye-Hardware nezingxenye ezenziwe ngomshini, njenge-shaft, igiya (isondo leketanga), i-cam, i-chuck kanye ne-clamp njll.
Cima isikhunta se-Hardware, esifana nesikhunta sosayizi omncane, isesekeli sesikhunta nomgodi wangaphakathi wesikhunta
I-3.Welding (i-braze welding, i-soldering yesiliva nokubopha)
Ukushisela amathuluzi ahlukahlukene wokusika okwe-Hardware, njengethuluzi ledayimane, ithuluzi elicasulayo, ithuluzi lokubhola, i-alloy saw blade, i-hard alloy cutter, i-milling cutter, i-reamer, ithuluzi lokuhlela kanye nendawo encane yesikhungo.
Ukushisela igajethi ehlukahlukene yemishini yehadiwe: I-soldering yesiliva kanye Ukukhishwa kwesibalo wezinsimbi ezinhlobonhlobo ezifanayo noma izinhlobo ezahlukahlukene, njenge-hardware yangasese kanye nemikhiqizo yasekhishini, ukufaka ifriji okufakwa esiqandisini, ukuhlobisa isibani, ukunemba kwesikhunta, isibambo sehadiwe, isigaxa seqanda, insimbi ye-alloy nensimbi, insimbi nethusi kanye nethusi nethusi.
Ukushisela phansi kwebhodwe eliyimbumbulu kusebenza ikakhulu ekushisheni kwe-braze okuyindilinga, isikwele kanye nokunye okungajwayelekile kwembiza esezansi. Kuyasebenza nasekushiseni kwe-braze okucacile kwezinye izinsimbi.
Ukushisela i-disc yokushisa kweketela lamanzi ashisayo kagesi ikakhulukazi kubhekisa ekushiseni kwe-braze kwensimbi engagqwali eyisisekelo, ishidi le-aluminium nezinto zokufudumeza kagesi eziyizimo ezahlukahlukene.
3.Annealing (tempering nokushintshashintsha kwezwi)
Ukuncishiswa kwemikhiqizo ehlukahlukene yensimbi engagqwali, efana nebheseni lensimbi engagqwali, ikani elifakiwe kanye nelikhishiwe, umphetho ohlanganisiwe, isinki efakiwe, ishubhu lensimbi engagqwali, i-tableware nenkomishi.
Ukunwetshwa kwezingcezu zomsebenzi wensimbi ezahlukahlukene, njengekholomu yebhola yegalufu, inkomba, ukukhiya ithusi, ukufaka ithusi lensimbi, isibambo sommese wasekhishini, i-blade, ipanini le-aluminium, i-aluminium pail, i-radiator ye-aluminium kanye nemikhiqizo ehlukahlukene ye-aluminium.
Ukuguqulwa kwamavamisa ukushisa kwe-electromagnetic induction noma ukufudumeza kokungeniswa okufushane kuyindlela yokushisa izinto zensimbi ngokuguqula ukunikezwa kwamandla kagesi wamandla kube kwebanga elithile ngokususelwa kumgomo wokungeniswa kwamandla kagesi. Kusebenza ikakhulu ekusebenzeni okushisayo kwensimbi, ekwelapheni ukushisa, ekushiseni nasekuncibilikeni. Lolu hlobo lwendlela yokushisa luyasebenza nasembonini yokupakisha (njengokufakwa uphawu kwe-aluminium foil esetshenziswa embonini yezokwelapha neyezokudla), okokusebenza kwe-semiconductor (okufana ne-silicon monocrystalline silicon kanye nezingxenye zensimbi ezifudunyeziwe zengilazi ezenzakalelayo).
Isisekelo sohlelo lokushisa lokungeniswa faka ikhoyili yokungeniswa, umthombo wamandla we-AC nezicucu zomsebenzi. I-coil ye-induction ingenziwa ngezimo ezahlukahlukene njengezinto ezahlukahlukene ezifudunyeziwe. Ikhoyili ixhunywe nomthombo wamandla ohlinzeka ngokushintshana kwamanje kwekhoyili. Ukushintshana kwamanje okuphethwe yikhoyili kungadala amandla kazibuthe ashintshanayo adlula ezingxenyeni zomsebenzi ukukhiqiza ukugeleza kwe-eddy njengoba kudingeka ngokushisa.
Izinzuzo zohlelo lokushisa lokungeniswa kwe-manetic
Ukushisa okusheshayo: isilinganiso esincane sokushisa singaphansi kwesekhondi eli-1 (izinga lokushisa liyatholakala ukuze kulungiswe futhi kulawulwe).
Ukusabalala okubanzi kokushisa: ingasetshenziselwa ukushisa izingxenye ezahlukahlukene zensimbi (buyisela ikhoyili yokukhipha ekhishwayo njengokushintshwa okuhlukile kokusebenza).
ukufakwa Easy: ingasetshenziswa uma ixhunywe nomthombo wamandla, ikhoyili yokungeniswa kanye nepayipi lokuhambisa amanzi kanye nepayipi elikhulayo; mncane ngosayizi futhi ulula ngesisindo.
Ukusebenza okulula: ungafunda ukuyisebenzisa ngaphakathi kwemizuzu eminingana.
Ukuqalisa okusheshayo: kungaqalwa ukwenza umsebenzi wokushisa ngaphansi kombandela wokuthi amanzi namandla kagesi ayatholakala.
Okuphansi amandla ukusetshenziswa: Njengoba kuqhathaniswa ne-vacuum tube evamile imishini yamandla aphezulu, ingonga amandla cishe ngama-70%. Okuncane ngosayizi wocezu lomsebenzi ukuthi, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi kungaba njalo.
Ukusebenza okuphezulu:inezici ezinjengokushisa okufanayo (kusebenza ukulungisa izikhala zekhoyili yokungeniswa ukuqinisekisa ukushisa okufanelekile njengoba kudingwa yingxenye ngayinye yomsebenzi), ukufudumala okusheshayo nokulinganiselwa kwe-oxic horizon, futhi kungavikela kunoma iyiphi imfucuza ngemuva kokufakwa.
Ukuvikelwa okuphelele:inemisebenzi efana nokucindezelwa ngokweqile, ukwedlula isikhathi samanje, ukushisa okukhulu kanye nezinkomba zokushoda kwamanzi kanye nokulawula nokuvikela okuzenzakalelayo.
Izinga lokushisa elilawulwayo: kusebenza ukulawula ukushisa kokushisa izingcezu zomsebenzi ngokwesikhathi sokushisa esethwe ngaphambilini, futhi ngaleyo ndlela ulawule ukushisa kokushisa endaweni ethile yobuchwepheshe.
Ukuhlanganiswa okuphelele kokulayisha okuphelele: ingasebenza ngokuqhubekayo amahora angama-24.
Usayizi omncane nesisindo esincane: inesisindo samakhilogremu ambalwa kuphela, lapho, isikhala esilinganiselwe sendawo singagcina ngempumelelo indawo yokusebenzela.
Ukuqedwa kwamandla aphezulu: ayidingi sinyathelo senyuka esingaveza ugesi ongaba yizinkulungwane eziyishumi, futhi ngaleyo ndlela ingaqinisekisa ukuphepha okuphezulu.